ओलीले चिनियाँ पेट्राेलियम अायात गर्न नेशनल ट्रेडिङ ब्यूँत्याउलान्? - कारोबार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
ओलीले चिनियाँ पेट्राेलियम अायात गर्न नेशनल ट्रेडिङ ब्यूँत्याउलान्?
नेशनल ट्रेडिङको सम्पत्ति कोलकत्ताको घरदेखि ७ करोडको रक्सीसम्म
दीपक भट्ट काठमाडौं माघ १८
सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर अहिले आपुर्ति मन्त्रालययदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म बहस चल्न थालेको छ। केही स्थानमा रहेको अचल सम्पत्ति विवादित समेत रहेकाले व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिएको छ।
२०२६ सालमा स्थापना भएर कारोबार सुरु गरेको नेशनल ट्रेडिङ विगत केही वर्षदेखि निरन्तर घाटामा गए पछि सरकारले खारेज गर्ने सम्मको निणर्य गरेको होे। घाटामा रहेको उक्त संस्थानलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि कर्मचारी कटौती गरेको थियो। संस्थानको जग्गा नै बिक्री गरेर कर्मचारीलाई अवकाससमेत दिएको थियो। उक्त सरकारले नयाँँ संरचनामा अघि बढाउने भनेर केही विकल्प समेत तयार पारेको थियो।
आपुर्ति मन्त्रालयले एक वर्षअघि नेपाल आयल निगमसँग गाभ्न सकिने, नेपालमा आयत हुने पेट्रोलियम पदार्थको एकाधिकार रहेकाले चीनबाट आयत गर्न सकिने तेलको जिम्मा नेशनल ट्रेडिङलाई दिन सकिने, नयाँ कर्मचारीहरु ल्याएर पहिलेको जस्तै कारोबार गर्न दिन सकिने, खाद्य संस्थानसँग गाभ्न सकिनेजस्ता विकल्पहरु तयार गरेको थियो। ती विकल्पहरु मध्ये सबैभन्दा पहिलो रोजाइमा चिनियाँ तेलको व्यवस्थापन गर्न दिने भन्ने नै परेको थियो।
उक्त संस्थानलाई अहिलेको सरकारले खारेज नै गर्ने भन्ने निर्णय गरेपछि त्यसको सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर आपुर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा बहस सुरु भएको छ। आपुर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलका अनुसार नेशनल टे«डिङको आफैमा सम्पत्ति धेरै भएको कारणले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर बहस सुरु भएको हो। त्यसको लागि चुनौती पनि धेरै रहेको उनको भनाइ छ। उक्त संस्थानको सम्पत्ति विवादित समेत रहेकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने उनको भनाइ छ। टेकुमा रहेको जग्गा आयल निगमलाई बेचेको र तथा धनगढीमा रहेको जग्गा गुण्डा नाइकेहरुले प्रयोग गरेको भन्दै विवादित बनेको हो।
आपुर्ति मन्त्रालयका अनुसार बजार मूल्यका आधार नेशनल ट्रेडिङको करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पति रहेको छ। नेशनल ट्रेडिङको कोलकत्तामा घर समेत रहेको छ। लामो समय नेशनल ट्रेडिङले कोलकत्तामा भाडामा रहेर कारोबार गरेपछि त्यहाँको सरकारी नियम अनुसार मोहीयानी हकमार्फत कोलकत्तामा एक फ्ल्याट पाएको हो। पहिलाको घर भत्किसके पनि उक्त स्थानमा नयाँ घर बन्दै छ। घर बनेपछि भुई तल्ला नेशनल ट्रेडिङ पाउने छ। उक्त घर नबनेसम्मका लागि भन्दै नेशनल ट्रेडिङले १६ लाख भारतीय रुपैयाँ धरौटी समेत बुझिसकेको आपुर्ति मन्त्रालयले जानाकारी दिएको हो।
त्यसैगरी नेशनलसँग धनगढी दुई बिघा, विराटनगरमा चार, वीरगन्जमा पाँच, दाङमा दुई, नेपालगन्जमा दुई र कञ्चनपुरमा एक बिघा जग्गा छ। यस्तै भद्रकालीमा पनि २५ रोपनी १५ आना जग्गा छ। यस्तै नेसनलसँग विशालबजार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल ल्युव आयल, साझा भण्डार, साझा सेवा, गोरखकाली रबर उद्योग र हिमाल सिमेन्ट लगायतका कम्पनीको शेयर रहेको छ। एक हजार ९ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार विशाल बजार कम्पनीको नेसनल ट्रेडिङसँग करिब ७० हजार कित्ता सेयर रहेको छ। लामो समयदेखि कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेपछि गत वर्ष नेशनल ट्रेडिङको टेकुमा रहेको ४९ रोपनी १० आना जग्गा बिक्री नेपाल आयल निगमलाई गरिएको थियो। त्यस्तै नेशनल ट्रेडिङले विदेशबाट खरिद गरेको सात करोडको रक्सी समेत बिक्री भएको छैन। उक्त रक्सीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समेत आगामी सरकारले लिनुपर्ने हन्छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग पनि पट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने सम्झौता गरेका थिए। उनले अहिले पनि चीनसँगको नाकामा सहजता दिन प्रयासरत देखिन्छन्। उनले चीनबाट ल्याउने तेल उक्त संस्थानलाई दिनुपर्ने मनसाय देखाएका थिए। पूर्व गभर्नर तथा योजनाविद् डा. युवराज खतिवडाले एमालले उक्त संस्थानलाई खारेज गर्न नचाहेको नेपालखबरलाई बताए। उनका अनुसार कुनै संस्थानसँग गाभेर नयाँ जिम्मेवारी दिएको भए नयाँ काम पनि हुने संस्थान पनि सुध्रने सक्ने थियो। डा. खतिवडा एमाले नेतृत्वको सरकारको सल्लाहकार समेत रहेका थिए।
प्रकाशित १८ माघ २०७४, बिहिबार | 2018-02-01 17:34:46